Robert Clark, mpaka sary faran'izay tia fatratra vorona | Famoronana an-tserasera
Izahay dia mitady imbetsaka amin'ny canvas ho an'ireo pitsopitsony sy mampiavaka azy izay mitarika antsika amin'ny aingam-panahy na ny fihaonana amin'ny zavatra manaitra korda ary mahatonga antsika manonofy vetivety. Izany no hatsarana lehibe amin'ny zavakanto rehefa mikasika izay tsy azo hazavaina amin'ny teny.
Izany mistery tadiavintsika amin'ny masontsika sy ny fahatsapantsika izany dia hita amin'ny endrika fiainana maro izay ananantsika manodidina antsika, toy ireo volom-borona ireo izay, rehefa mandeha amin'ny mason'ny fakantsary, afaka mamela antsika tsy hiteny isika amin'ny an-tsipiriany kely an'arivony amin'ny endriny, endrika sy loko.
Mitranga izany amin'ny sarin'i Robert Clark izay mitondra antsika hiverina amin'ny tontolo iray izay karazam-borona marobe fenoy ny takelaka am-polony izay mamorona ny volony Feathers: Displays of Brilliant Plumage.
Una fandinihana an-tsary mahaliana ny maro loko ary ny endrika izay azon'ny volom-borona tsotra ananana. Ao amin'ity boky ity, ny fakana sary mitohy ny karazam-borona isan-karazany sy ny volony dia ampifandraisina amin'ny famaritana ny fiasan'izy ireo sy ny fivoarany nandritra ny taonjato maro. Manomboka amin'ny volom-borona maitso mandravaka ny loha volamena an'ny Quetzal any Amerika atsimo ka hatramin'ny akoho akoho nentim-paharazana.
Ny fahalianan'i Clark an'ireo biby ireo dia noho ny fahazazany nandany ora maro nijerena vorona mpifindra monina izy ao amin'ny fari-piadidian'i Kansas. Nihalehibe ny fahalianana ary nanomboka nanadihady ny teôria momba ny evolisiona an'i Darwin izy mba hahalalany fa ny vorona dia ampahany lehibe amin'ny fampivoarana ireo hevitra manan-danja toy izany.
Miaraka amin'ny 15 taona niasana ho an'ny National Geographic, dia nahitana fonosana am-polony maro ary loka marobe noho ny kantony amin'ny sary.
Ianao dia manana ny instagram y ny tranonkalanao hanaraka ny anao sary mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ireo sary ireo dia mizaha ny antsipirian'ny volom-borona manerana an'izao tontolo izao